China Acryli Mirror Ibé akwụkwọ factory na suppliers | Donghua
Na-erite uru site n'ịbụ ndị dị fechaa, mmetụta, na-eguzogide ọgwụ, na-adịchaghị ọnụ ma na-adịte aka karịa iko, a ga-eji mpempe akwụkwọ enyo acrylic anyị dị ka ihe ọzọ na enyo ọdịnala ọdịnala maka ọtụtụ ngwa na ụlọ ọrụ. Dị ka ihe niile acrylics, anyị acrylic mirror Ibé akwụkwọ nwere ike mfe ebipụ, gbapuru, guzobere chepụtara na laser etched.
• Odi na 48 ″ x 72 ″ / 48 ″ x 96 ″ (1220 * 1830mm / 1220x2440mm) akwa; omenala nha dị
• Ọ dị na .039 ″ ka .236 ″ (1.0 - 6.0 mm) oke
Erite uru ịbụ fechaa, mmetụta, shatter-eguzogide, dị ọnụ ala ma na-inogide karịa iko, anyị acryli mirror akwụkwọs nwere ike ji dị ka onye ọzọ na omenala iko enyo maka ọtụtụ ngwa na ụlọ ọrụ. Dị ka ihe niile acrylics, anyịacryli mirrorIbé akwụkwọ nwere ike mfe ebipụ, gbapuru, guzobere chepụtara na laser etched. Ngwa enyo anyị nwere n'ụdị dị iche iche, ike na nha, anyị na-enyekwa nhọrọ nhọrọ ịkpụcha.
Aha ngwaahịa Clear acrylic mirror ihu igwe mpempe akwụkwọ
Ihe onwunwe Virgin PMMA ihe
Agba Clear, ọlaọcha
Nha 1220 * 2440 mm, 1220 * 1830 mm, omenala ịkpụ na-size
Ọkpụrụkpụ 1-6 mm
Njupụta 1,2 g / cm3
Masking Ihe nkiri ma ọ bụ kraft akwụkwọ
Ngwa Cochọ mma, mgbasa ozi, ngosipụta, ọrụ aka, ihe ịchọ mma, nchekwa, wdg.
Oge nlele Daysbọchị 1-3
Oge Mbuga ozi 10-20 ụbọchị mgbe na-etinye ego
N'ihi nrụpụta na ịkpụchasị ogologo, mpempe akwụkwọ na obosara nwere ike ịdị iche site na +/- 1/4 ″. Mkpebi ọkpụrụkpụ bụ +/- 10% na mpempe akwụkwọ acrylic ma nwee ike ịdị iche na mpempe akwụkwọ niile. Nọmalị anyị na-ahụ ọdịiche erughị 5%. Biko rụtụ aka na njupụta na akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị n'okpuru.
Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ikike dịkwuo mkpa karịa karịa ogo anyị.
Anyị acrylic mirror Ibé akwụkwọ ndị kwesịrị ekwesị maka a dịgasị iche iche nke ngwa. Enwere otutu ihe eji eme ya, nke kachasi anya bu ire ere / Ebe a na-azuta, ihe ngosi, akara ngosi, nchekwa, ihe ịchọ mma, mmiri, na ọrụ ụgbọ ala, yana ngwa mma na ime ụlọ, okwu ngosi, POP / retail / ụlọ ahịa fixtures, ji achọ na ime imewe na Mee N'onwe Gị ngwa ngwa.
Dhua Acrylic Mirror Sheet ka na extruded acrylic mpempe akwụkwọ. A na-eme mirrowzing site n'usoro nke agụụ metallizing na aluminum ịbụ isi metal evaporated.
acryli mirror akwụkwọ
doro anya Acryli Mirror
mirror acrylic mpempe akwụkwọ
mirror ihu igwe
ọlaọcha acryli mirror
ọlaọcha mirror acrylic